Global Voices teny Malagasy » Shinoa iray Tomponà Media Sosialy Nahazo Loka, Notanan’ireo Manampahefana Ho Fanohizany Ny Fampanginana Ireo Mpiaro Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy » Print
Shinoa iray Tomponà Media Sosialy Nahazo Loka, Notanan'ireo Manampahefana Ho Fanohizany Ny Fampanginana Ireo Mpiaro Zon'Olombelona
Voadika ny 02 Janoary 2017 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Huang Qi. Sary avy amin'ny Radio Free Asia.
Lahatsoratra nosoratan'i Catherine Lai ity ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press (HKFP) ny 30 Novambra 2016. Ny dika eto ambany dia navoakan'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Taorian'ny nisavàn'ny polisy ny tranony dia nampidirina am-ponja ilay mpanorina ny tranonkalam-baovao Shinoa iray tantanin'olontsotra. Huang Qi no fanintelony amin'ireo malaza mpiaro zon'olombelona ao Shina nanjavona na notànana tato anatin'ny tapabolana, taorian'ny nanjavonan'ilay mpisolovava Jiang Tianyong sy ilay olontsotra mpanao gazety Liu Feiyue, izay inoan'ireo mpikatroka mafàna fo fa any ampojan'ny polisy.
Niditra an-keriny tao an-tranon'ilay mpamorona ny tranonkala ireo polisy, nisava ary nihazona an'i Huang ny alin'ny Alatsinainy 27 Nov 2016 teo, hoy ny mpikatroka iray ao an-toerana nilaza tamin'ny Radio Free Asia (RFA) tohanan'i Etazonia. Nitondra fahazoandàlana hisava izy ireo, hoy izy.
Ny vaovao momba ny fisamborana azy tao amin'ny Twitter dia navoakan'i Pu Fei , mpandray anjara an-tsitrapo iray ao amin'ny tranonkala 64 Tianwang, saingy nofafàna ilay bitsika no sady tsy nety azo hifandraisana intsony koa i Pu nanomboka teo, araka ny vaovao nampitain'ny tranonkala Weiquanwang, miasa ao Hong.Kong manaraka akaiky ny resaka zon'olombelona. Ny antso iray natao an'i Pu dia toa iheverana fa nopihana ny findainy.
Nilaza tamin'ny RFA ny renin'i Huang fa nentin'ny polisy ireo sary maromaro tao ary nikaroka izay rehetra fanànan'i Huang koa ry zareo.
Araka ny filazan'ireo vavolombelona roa, nanatrika teo ireo manamboninahitra avy any Mianyang sy Neijiang — faritra niantraikàn'ilay horohorontany Sichuan tamin'ny 2008. Efa nofonjaina i Huang tamin'ny Novambra 2011 taorian'ny nanaovany fanadihadiana momba ny voalaza fa asa fanorenana tsizarizary niteraka ny fahafatesan'ireo ankizy mpianatra nandritra ilay loza voajanahary
Vao haingana i Huang no notànana, nandritry ny fihaonamben'ireo sangany ao amin'ny Antoko Kaominista tamin'ny Oktobra. Misy sary maneho fa nosavaina ny tranony, niparitaka tamin'ny tany ny entany. Nogiazan'ny manampahefana ihany koa ny solosainy.
Mijanona tsy misy valiny ireo antson'ny HKFP mankany amin'ny findain'i Huang Qi.
Tranonkalam-baovao miahy tena ny 64Tianwang, izay mamoaka lahatsoratra miresaka tranga momba ny zon'olombelona ao Shina, tafiditra amin'izany ny fitazonana ataon'ny polisy, ny fandravàna an-terisetra, ny fihetsiketsehana sy fanangonan-tsonia atao anaty fikatrohana. Vao haingana izy no nahazo ny lokan'ny Fahalalahana 2016 nomen'ny Reporters Sans Frontières. Any am-pigadrana ankehitriny ny sivy amin'ireo mpanao gazety nandray anjara tao amin'ilay tranonkala, ary dimy no nafahana rehefa avy nampandoavina onitra, hoy ny Tianwang.
Ny Alarobia 29 Nov 2016, namoaka fanambaràna ny Chinese Human Rights Defenders (CHRD), tambajotran'ireo ONG Shinoa sy iraisampirenena mpiaro zon'olombelona, nitakiana ny famotsorana an'i Huang, sy i Jiang Tianyong mpisolovava ary i Liu Feiyue, olon-tsotra mpanao gazety.
Jiang Tianyong sy Liu Feiyue. Sary avy amin'ny Radio Free Asia.
Mpisolovava mpiaro zon'olombelona i Jiang Tianyong, izay vao haingana no niasa namoaka ny famoretana ataon'i Shina amin'ireo mpisolovava. Tsy re intsony ny momba azy nanomboka ny Alatsinainy. Liu Feiyue, mpanorina ny tranonkala fanarahana maso ny resaka zon'olombelona, dia voalaza fa nalain'ny polisy tamin'ny Alakamisy 24 Nov lasa teo. Nilaza ny iray tamin'ny fianakaviana fa heloka bevava noho ny ‘fanaingàna olona hanakorontana fanjakàna’ no itazonana azy, saingy tsy naharay filazàna ofisialy avy amin'ny polisy ny fianakaviany, na kely aza.
Nilaza ny CHRD hoe :
Avy amin'ny vaovao voarain'ny CHRD, inoana fa aminà toerana miafina no itazonan'ny polisy ireny olona ireny, mampitombo ny tahotra hoe iharan'ny fampijaliana izy ireny […] Ny fitazonana sy ny fanjavonana misesy manjo ireny endrika fantatry ny maro amin'ny fitarihana ny hetsika fiarovana ny zo ao Shina ireny dia marika bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny famoretana tsy itandroan'ny filoha Shinoa Xi Jinping hasasarana ataon'ny amin'ny fiarahamonina sivily.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/02/92901/
 navoaka : https://www.hongkongfp.com/2016/11/30/founder-of-chinese-citizen-news-site-taken-from-his-home-during-police-raid-as-crackdown-continues/